ဒူဒူကြီး: ‘VFD - Variable frequency drive (၁)'
'VFD' ဆိုတဲ့ 'variable frequency drive' ကို၊ adjustable frequency drive, variable speed drive, AC drive, micro drive နဲ့ inverter ရယ်လို့လည်း၊ ခေါါကြပြီး၊ electric motor ရဲ့ လည်ပတ်နှုံး speed ကို၊ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် VFD ဟာ ‘electro-mechanical drive system’ ဖြစ်ပြီး၊ input frequency နဲ့ voltage တွေကို၊ ပြောင်းလဲ ပေးသွင်းခြင်းဖြင့်၊ electric motor ရဲ့ speed နဲ့ torque တွေကို၊ လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Small variable-frequency drive and Chassis of VFD (cover removed)
VFD တွေကို၊ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ small appliances တွေမှ၊ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသုံး mine mill drives တွေအထိ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပုံသေလည်ပတ်နှုံး fixed speed ဖြင့်မောင်းနှင်နေတဲ့ electric motors တွေနေရာမှာ၊ VFD ကို retrofitted installation အနေနဲ့ အစားထိုးတတ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ စွမ်းအင်မြင့်တက်လာမှုဆိုတဲ့ energy efficiency improvement ရရှိလာနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. VFD system
VFD တွေကို၊ အသုံးပြုမယ့် applications အပေါါမူတည်ပြီး၊ low and medium voltage ပမာဏအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ AC - AC နဲ့ DC - AC inverters တွေအဖြစ်၊ ထုတ်လုပ်ထားကြပါတယ်။ VFD မှာ AC motor, main drive controller assembly နဲ့ drive operator interface ဆိုတဲ့ main sub-systems (၃) ခုကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ VFD ကို ယေဘုယျအနေနဲ့ ‘AC three - phase induction motor’ တွေဖြင့်၊ တွဲဖက်အသုံးပြုသလို၊ ‘single - phase motor’ အချို့နဲ့လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ‘variable frequency drive controller’ တွေကို ‘solid state power electronics conversion system’ ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ rectifier bridge converter, direct current (DC) link နဲ့ inverter တို့ပါဝင်ပါတယ်။
VFD အမျိုးအစား၊ မြောက်များစွာထဲမှ ‘VSI’ ဆိုတဲ့ voltage-source inverter drive ဟာ၊ အသုံးများတဲ့ drive controller တခုဖြစ်ပါတယ်။ drive controller အများစုဟာ ‘AC - AC drive’ တွေဖြစ်ကြပြီး၊ ပေးသွင်းလိုက်တဲ့ AC line input ကို AC inverter output အဖြစ်၊ ပြန်လည် ထုတ်ပေးပါတယ်။ common DC bus နဲ့ solar applications တွေမှာတော့ ‘DC - AC drive controller’ တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ VSI drive မှာအသုံးပြုထားတဲ့ rectifier converter ဟာ ‘three phase, six pulse, full wave diode bridge’ အမျိုးအစား rectifier ဖြစ်ပါတယ်။ drive controller တွေကို၊ single - phase converter input ပေးသွင်းပြီး၊ three - phase inverter output ထုတ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်၊ ‘phase converter’ အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
‘DC link’ မှာ capacitor ပါဝင်ပြီး၊ rectifier converter မှ DC output ripple တွေကို၊ စစ်ယူဖယ်ရှားကာ၊ ‘stiff input’ အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမှ၊ inverter သို့ ပေးသွင်းပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် inverter ရဲ့ active switching elements တွေအတွက်၊ quasi - sinusoidal AC voltage output အဖြစ်၊ filtered DC voltage ကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ‘VSI’ ဆိုတဲ့ voltage -source inverter drives တွေကို၊ ‘CSI’ ဆိုတဲ့ phase-controlled current-source inverter drives တွေအပါအဝင် ‘LCI’ ဆိုတဲ့ load-commutated inverter တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ မြင့်မားတဲ့ higher power factor ရရှိနိုင်တာတွေ့ရသလို၊ harmonic distortion အနည်းငယ်သာပေါါပေါက်တာတွေ့ရပါတယ်။
variable - torque applications တွေအတွက်၊ ‘Volts per Hertz (V/ Hz) drive control system’ ကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ AC motor တွေရဲ့ characteristics အရ၊ motor သို့ပေးသွင်းမယ့် inverter output မှ voltage magnitude ဟာ၊ required load torque နဲ့ linear V/ Hz relationship အဖြစ် ကိုက်ညီရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။ 460 volt, 60 Hz motors ရဲ့ linear V/ Hz relationship ဟာ 460/ 60 = 7.67 V/ Hz ဖြစ်ပါတယ်။ V/ Hz drive control system ဟာ၊ low speed or demanding, dynamic speed regulation, positioning နဲ့ reversing load requirements အစရှိတဲ့ high performance applications တွေမှာ၊ အသုံးပြုရန် သင့်လျှော်ပါတယ်။
အချို့ V/ Hz drive control system တွေကို၊ quadratic V/ Hz mode အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို၊ programmed ထည့်သွင်းကာ multi-point V/ Hz paths တွေအဖြစ်လည်း၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခြား drive control system တွေဖြစ်တဲ့ vector control system နဲ့ DTC ဆိုတဲ့ direct torque control system တို့ဟာလည်း၊ motor သို့ပေးသွင်းမယ့် voltage magnitude ကို adjusted အနေနဲ့ ချိန်ညှိပေးပြီး၊ motor ရဲ့ magnetic flux နဲ့ mechanical torque တွေကို၊ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Fig. SPWM carrier-sine input & 2-level PWM output
နောက်ပိုင်းမှာတော့ 'SVPWM' ဆိုတဲ့ space vector pulse - width modulation method ကို၊ drive control system အဖြစ်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ sinusoidal PWM လို့ခေါါတဲ့ space vector pulse - width modulation method ဟာ၊ motor သို့ပေးသွင်းမယ့် voltage (or current) သို့မဟုတ် frequency ကို vary drives အနေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးတဲ့ drive control system ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် motor သို့ပေးသွင်းမယ့် voltage (or current) ရဲ့ operating frequency ကို၊ saw-toothed carrier frequency အတွင်းမှ ဖြတ်သွားတဲ့ modulating sinusoidal signal အသုံးပြုပြီး၊ quasi - sinusoidal ဆိုတဲ့ variable-pulse-width output အဖြစ် ပြောင်းယူ ပေးသွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
induction motor တွေရဲ့ nameplate မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ rated speed ထက်ပိုပြီး မောင်းနှင်နိုင်ပေမယ့်၊ nameplate မှာရေးသား ဖော်ပြထားတဲ့ voltage ထက် အနည်းငယ် ပိုပြီး၊ ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ "field weakening" အခြေအနေ ပေါါပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် AC motors တွေကို၊ rated V/ Hz ရဲ့ အောက်မှာ မောင်းနှင်မှသာ၊ 100% power ရရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
VFD controllers တွေရဲ့ overall operation တခုလုံးကို၊ programmed သွင်းထားတဲ့ embedded microprocessor တွေမှ၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ microprocessor တွေကို 'user inaccessible firmware' ဆိုတဲ့၊ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရစေရန် ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ control, protect, monitor, motor နဲ့ driven equipment တွေ ကိုတော့၊ display, variable နဲ့ function block parameters အနေနဲ့ အသုံးပြုသူမှ user programming သုံးပြီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
driver controller တလုံးမှာပါဝင်တဲ့ optional power components တွေနဲ့ accessories အစိတ်အပိုင်းတွေကို၊ မှတ်သားမိသလောက် ဖော်ပြပါဦးမယ်။ converter ရဲ့ upstream အဝင်ဖက်မှာ၊ circuit breaker သို့မဟုတ် fuses တွေ၊ isolation contactor, EMC filter, line reactor နဲ့ passive filter တို့ကို၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ DC link ကို braking chopper နဲ့ braking resistor တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး၊ inverter ရဲ့ downstream အထွက်မှာတော့ output reactor, sine wave filter နဲ့ dV/ dt filter တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
မောင်းနှင်သုံးစွဲသူ operator အနေနဲ့ မောင်းနှင်ရပ်တန့်ခြင်း start and stop နဲ့ လိုအပ်သလို operating speed ချိန်ညှိခြင်းတွေကို၊ 'operator interface' မှတဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
operator interface ဆိုတဲ့ operator control functions တွေမှာ reversing နဲ့ manual speed adjustment အနေအထားမှ၊ external process control signal ကိုရယူပြီး၊ automatic control အဖြစ်၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ drive ရဲ့ operation information တွေကို၊ operator interface မှ အက္ခရာနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို၊ ကိုယ်စားပြုတဲ့ alphanumeric display အနေနဲ့ ဖော်ပြသလို၊ indication lights တွေနဲ့ meters တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
keypad display ကို၊ alphanumeric display နဲ့အတူ VFD module ရဲ့ ကိုယ်ထည်မှ front dead cover မှာ အတူတွဲကာ တတ်ဆင်ထားတတ်သလို၊ cable-connected အနေနဲ့ VFD controller ရဲ့ မနီးမဝေး short distance အကွာအဝေးမှာလည်း၊ တတ်ဆင်ထားတတ်ပါတယ်။ အချို့ VFD controller တွေမှာ connecting push buttons တွေအတွက်၊ input and output (I/O) terminals တွေ၊ switches တွေ၊ operator interface devices တွေနဲ့ control signals တွေအတွက် terminals တွေ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် computer နဲ့ တွဲဖက်ပြီး၊ configured, adjusted, monitored တို့ controlled တို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် serial communications port တွေကိုလည်း၊ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
VFDs တွေရဲ့ drive applications သို့မဟုတ် drive operation ကို၊ single-quadrant, two-quadrant နဲ့ four-quadrant ဆိုပြီး၊ categorized အနေနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. Electric motor speed-torque chart
'Quadrant I' ဟာ driving နဲ့ motoring တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ forward accelerating quadrant လို့ခေါါပြီး၊ positive speed နဲ့ torque ကို၊ ရရှိစေပါတယ်။ 'Quadrant II' ကတော့ generating နဲ့ braking တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ forward braking-decelerating quadrant လို့ခေါါပြီး၊ positive speed နဲ့ negative torque ကို၊ ရရှိစေပါတယ်။ 'Quadrant III' ဟာလည်း driving နဲ့ motoring တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ reverse accelerating quadrant လို့ခေါါပြီး၊ negative speed နဲ့ torque ကို၊ ရရှိစေပါတယ်။ 'Quadrant IV' ဟာ generating နဲ့ breaking တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ reverse braking - decelerating quadrant လို့ခေါါပြီး၊ negative speed နဲ့ positive torque ကို၊ ရရှိစေပါတယ်။
applications အများစုဟာ single - quadrant loads operating တွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ Quadrant I ကို ပိုမိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ variable - torque လိုအပ်တဲ့ centrifugal pumps တွေ၊ blower fans တွေ နဲ့ certain constant - torque လိုအပ်တဲ့ extruders loads တွေအတွက်၊ Quadrant I ဟာ အသင့်လျှော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ applications တွေ မှာတော့ two - quadrant loads operating အဖြစ်အသုံးပြု၊ မောင်းနှင်ရတဲ့အတွက်၊ Quadrant I နဲ့ Quadrant II တို့ကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ two - quadrant loads တွေဟာ positive speed load တွေဖြစ်ပြီး၊ decelerating အနေနဲ့ speed ပြောင်းလဲတဲ့အခါ၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် natural mechanical losses တွေထက် ပိုမိုလျှန်မြန်စွာပြောင်းလဲရန်အတွက်၊ တနည်းအားဖြင့် natural mechanical losses တွေမပေါါပေါက်ခင် speed ပြောင်းလဲသွားရန်အတွက်၊ polarity ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် torque ပြောင်းလဲပေးတဲ့ applications တွေဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် blower fan တွေမှာ၊ two - quadrant loads operating ကို အသုံးပြုတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
positive သို့မဟုတ် negative polarity တနည်းအားဖြင့် motor ရဲ့ လည်ပတ်မှုလားရာ direction (၂) ဖက်စလုံးမှာ speed နဲ့ torque တို့တူညီရန်လိုအပ်မယ့် applications တွေမှာတော့ Quadrants I နဲ့ Quadrants III တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ two - quadrant drives တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သဘေ်ာမှ bow thruster တွေ၊ cargo pumps တွေ၊ hoist တွေ၊ စက်လှေကား elevators တွေနဲ့ hilly conveyors တွေအပြင် အအေးခန်း regeneration system တွေ၊ အစရှိတဲ့ high performance applications တွေမှတော့ four-quadrant loads လို့ခေါါတဲ့ Quadrants I နဲ့ IV တို့ကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ regeneration system မှာ inverter voltage နဲ့ back EMF တို့ရဲ့ polarity တူညီပေမယ့်၊ inverter voltage ရဲ့ magnitude ဟာ၊ motor back EMF ရဲ့ magnitude ထက်သေးငယ်တဲ့အတွက်၊ DC link bus တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
motor စတင်လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ direct on line starting မှာပေါါပေါက်လာမယ့် မြင့်မားတဲ့ high inrush current ဖြစ်ပေါါမှုကို၊ ရှောင်လွဲရန် VFD မှတဆင့် low frequency နဲ့ voltage ကို ကနဦး initially အနေနဲ့ပေးသွင်းပါတယ်။ motor လည်ပတ်သွားတဲ့အခါ starting sequence အနေနဲ့ VFD မှ frequency နဲ့ voltage ကို တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပြီး၊ controlled rate သို့မဟုတ် ramped up to accelerate the load အနေအထားသို့ ချက်ခြင်းရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။ VDF အသုံးပြုထားတဲ့ starting method ကြောင့် motor မှာ rated torque ရဲ့ (150 %) အထိရနိုင်သလို၊ low speed range အတွင်းမှာ rated current ရဲ့ (50 %) ပမာဏကိုသာ၊ VDF မှ ဆွဲယူပါတယ်။ (150 %) starting torque ဟာ motor full speed ဖြင့် လည်ပတ်သွားတဲ့အထိ တည်ငြိမ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
low speed operation ဖြင့်မောင်းနှင်နေစဉ်၊ motor အေးစေမယ့် cooling system ဟာ deteriorates အနေနဲ့ ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အခါ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ significant torque မရရှိနိုင်တာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ motor တွေမှာ သီးခြား separately-motorized fan ventilation အအေးခံစနစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
VFD အသုံးပြုထားတဲ့ motor တွေကို၊ ရပ်တန့်စေမယ့် stopping sequence ဟာ၊ စတင်မောင်းနှင်တဲ့ starting sequence နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် opposite sequence ဖြစ်ပါတယ်။ VFD မှတဆင့် frequency နဲ့ voltage ကို လျှော့ချပေးလိုက်ပြီး၊ control rate ရဲ့အောက် သို့မဟုတ် ramped down အနေနဲ့ ဆွဲချယူကာ၊ frequency ဟာ 'zero' သို့ ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ motor ရပ်သွားပါတယ်။ motor မရပ်ခင် decelerate အနေနဲ့ braking torque အနည်းငယ်ဖြင့် load ကို၊ ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ braking energy ပိုမိုလိုအပ်တဲ့ applications တွေမှာတော့၊ transistor controlled resistor တွေကို၊ braking circuit အဖြစ်တတ်ဆင်ကာ၊ braking energy အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ active front end ဆိုတဲ့ four quadrant rectifier အသုံးပြုထားတဲ့ VFD တွေမှာ၊ reverse torque ကိုအသုံးပြုပြီး၊ brake load ကို ရယူပါတယ်။
Reference and image credit to : Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Cleaveland, Peter (Nov. 1, 2007). "AC Adjustable Speed Drives". Control Engineering (Reed Business Information)., "Energy Regeneration". Retrieved Apr. 20, 2012., Basics of AC Drives, pp. Hardware - Part 1: slides 9-10 of 11., Bose, Bimal K. (2006). Power Electronics and Motor Drives : Advances and Trends. Amsterdam: Academic. p. 22. ISBN 978-0-12-088405-6., Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Eisenbrown, Robert E. (May 18, 2008). "AC Drives, Historical and Future Perspective of Innovation and Growth". Keynote Presentation for the 25th Anniversary of The Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium (WEMPEC). University of Wisconsin, Madison, WI, USA: WEMPEC. pp. 6–10.,
Posted by ကိုထွန်း at 17:53